စိတ်ညစ် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေကို ချက်ချင်းပျော်ရွှင်နိုင်စေမယ့် နည်းလမ်း ၅ ခု
Home General Knowledge စိတ်ညစ်စိတ်ဓါတ်ကျနေသူတွေကိုချက်ချင်းပျော်ရွှင်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်း၅ ခု
မင်းစိတ်ညစ်နေလား? မင်းဒီ့ထက်ပိုမို ပျော်ရွှင်ချင်တာလား? ရုံးမှာ နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ရတယ်၊ အိပ်စက်မှုနည်းမယ်၊ အာဟာရချို့တဲ့မယ် ပြီးတော့အခြား စိတ်ဖိစီးမှုပေါင်းများစွာက မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ပျက်ပြားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေအကုန်လုံးက အပျက်သဘောဆောင်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ ခံစားမှုတွေက မင်းဘ၀ကို ထိန်းချုပ်ခံထားရလို့ပါ။
ဒါကြောင့် သင့်ပျော်ရွှင်မှုကို ပြန်ရနိုင်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်မှရပါမယ်။ချမ်းသာတဲ့ ကျော်ကြားတဲ့လူတိုင်းလည်း ပျော်ရွှင်မှုကို မပိုင်ဆိုင်ကြပါဘူး။ အပျော်စီး ဇိမ်ခံ သင်္ဘောကြီးနဲ့ရွက်လွှင့်နေတဲ့ သူဌေးကြီးရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမီးတောက်တွေတောက်လောင်နေလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိနိုင်ကြပါဘူး။
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ငွေကြေးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူမှရတဲ့အရာမျိုးပါ။ ဒီတော့ ပျော်ရွှင်မှုကို ဘယ်လိုဖန်တီးယူရမလဲဆိုတဲ့ သိပ္ပံနည်းကျအချက် ၅ ချက်ကိုလုပ်ကြည့်ပါ။ အရင်ထက် သင့်စိတ်နဲ့ကိုယ် ပျော်ရွှင်လာမှာပါ။
သင့်ကိုခုချက်ချင်း ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ သိပ္ပံနည်းကျအချက်၅ချက်
လက်ဖက်စိမ်းရည် (Green Tea)ရဲ့ ရှေးကျတဲ့ လျို့၀ှက်ချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သူက နူးညံလန်းဆန်းမှုနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့နည်းသက်သာစေတဲ့ အရည်အသွေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ဒီချိုမြိန်တဲ့ အရွက်လေးတွေက စိတ်ခံစားမှုကို တိုး တက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
လေ့လာမှုတွေအရ ဆို Green Teaသောက်သုံးသူတွေက အခြားလူတွေထက် ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိတယ်၊ စိတ်ဖိ စီးမှုတွေလျော့နည်းသွားတယ်၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်တယ်၊ စိတ်ခံစားမှုကိုရွှင်လန်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျော်ရွှင်မှုကိုချက်ခြင်းခံစားချင်ရင် အခုပဲ ခွက်တစ်ခွက်ယူပါ၊ လက်ဖက်စိမ်းတစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက ဦးနှောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပရိုတိန်း(Protein)နဲ့ အန်ဒရိုဖင်း(Endrophins)တွေကို ထုတ်လွှတ် ပေးပြီး ဒီအရာတွေက စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပတ်မှု၊ မိမိကိုယ်မိမိလေးစားမှုနည်းပါးခြင်းနဲ့အခြားသော၀ေဒနာတွေကိုကုသပေးပြီး ပျော်ရွှင်မှုကိုကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။
တချို့ စိတ်ဓါတ်အရမ်းကျတဲ့လူတွေ မူးယစ်ဆေးစွဲရာက ပြန်လည်ထူထောင်လာသူတွေဆို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းပဲ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်အောင်ပြန်တည်ဆောက်ရပါတယ်။ မယုံရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
အမျိုးသားကျန်းမာရေးဌာနမှထုတ်ဝေတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ စိုးရိမ်မှုများကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးစိတ်ခံစားချက်များကိုတိုးတက်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဦးနှောက်စွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးအခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေး ဇူးများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သုတေသနပြုမှုတွေအရ လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ပြီး မိနစ် ၂၀ အတွသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကတက်ကြွလာပြီး တစ်နေ့တာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တရားထိုင်တာ ယောဂကျင့်တာနဲ့ပက်သက်ပြီး သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုများစွာကို ၂၀၁၃ခုနှစ်အတွက် ၂၀၀ကျော်ကျော်လောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါတွေ့ရှိချက်ကအံသြစရာကောင်းတယ်လို့ အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
တရားထိုင်တာဟာ ဦးနှောက်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းနဲ့ငြိမ်းအေးအောင်လုပ်နိုင်ပြီး ဒါဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုတွေကိုတောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်တွေက ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
တရားထိုင်တာဟာ မှတ်ညဏ်ကိုပိုကောင်းမွန်စေသလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်ပတ်မှုကို လည်းကောင်းမွန်စေပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုရယူလိုသူတွေ သုံးတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်မယုံဘူးဆိုရင် တစ်ရက်ကို နံနက်ပိုင်းမှာ ၅မိနစ် ညပိုင်းမှာ ၅ မိနစ်လောက်တရားထိုင်ကြည့်လိုက်ပါ မိတ်ဆွေ…
အိပ်စက်ခြင်းဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်လည်ကျန်းမာစေပြီးပြန်လည်အားအင်ပြည့်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ဖြစ်စေ၊ စိုးရမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်စေညဘ က် မအိပ်စက်နိုင်သူတွေဟာ နောက်တစ်နေ့မှာ ထိုင်းမှိုင်းလေးလံနေပြီး ပျော်ရွှင်မှုလည်း မရှိနိုင်ပါဘူး။
အိပ်ရေးဝဝ အိပ် စက်ခြင်းက စိတ်ကိုလန်းဆန်းတက်ကြွစေပြီး စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်.။ ဒါကြောင့် သင်ပျော်ရွှင်မှုကို ပိုမိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် များများအိပ်စက်ပါ။
အမြဲတမ်းလိုလို ကျွန်တော်တို့ ကျေးဇူးတင်စရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ခုဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ အသက်ရှုရှိုက်နေရတဲ့ လေကိုတောင် ကျေးဇူးတင်လို့ရတယ်မလား? လောကကြီးရေ မင်္ဂလာပါလို့ ၀မ်းမြောက်၀မ်းသာ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။
သိပ္ပံပညာအရ သင်ကျေးဇူးတင်သင့်တဲ့ အရာတွေကို ရေးချခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ နောက်လေ့လာမှုတွေအရ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းကြောင့် စိတ်ကျရောဂါကိုတောင်လျော့နည်းသွားစေပြီး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဘ၀ကို ကျေနပ်အားရမှုတိုးတက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကဲဒီတော့ မင်းရဲ့ မှတ်ညဏ် စိတ်ခံစားမှုနဲ့ ဦးနှောက်ကို ပြန်လည်အားဖြည့်ဖို့ ကျေးဇူးတင်လွှာတွေရေးလိုက်ပါနော်..ကဲ ဒီလောက်ဆို အပေါ်က သိပ္ပံနည်းကျ အချက်တွေက မင်းဘ၀ကို ပိုမိုပျော်ရွှင်လာအောင် ဆောင်ယူလာပေးပါလိမ့်မယ်နော်။ မယုံမရှိနဲ့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်.
Previous articleသင့်အစားအစာကို အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ချက်ပြုတ်နည်း အမှားများ
Next articleအမျိုးသမီးတွေမှာသာ တွေ့ရနိုင်တဲ့ အံ့ဩဖွယ်ရာအစွမ်းသတ္တိများ